Semalt na-akọwa Uru ndị ọbịa na-eziga maka gị SEO
Ndị nzipu ozi na-ebute ịdekọ ọdịnaya gị na ebe nrụọrụ weebụ ọzọ. Ndị na-ede blọgụ na-eji akọ a eme ihe iji mee ka ha hụ na ha ga-enweta okporo ụzọ. Izi ozi ndi mmadu bu oru eji eme ihe iji meziwanye mgbalị SEO.
Michael Brown, Onye Ahịa Na-aga nke Ọma Semalt na-akọwa otú e si esi mee ka ọ bụrụ onye ọbịa mara mma.
Gụọ iwu nke weebụsaịtị ị na-ezube tupu ịdee akwụkwọ ozi ọbịa. Mbụ, ọ dị mkpa ịkpọtụrụ onye nwe blog ahụ - fidelity bank appraisals. Imirikiti ndị mmadụ nwere ike ịchọ ka ị kwadoro ọkwa zuru ezu ma ọ bụ chee echiche. Ịgụ usoro ntụziaka nke blog gị na-enyere gị aka ịchọpụta usoro njikwa ọdịnaya ha. Ụfọdụ ụlọ ọrụ dịka Joomla, WordPress ma ọ bụ Drupal nwere ike ịchọ ka ịnweta akaụntụ onye ọrụ maka mfe nke ozi ịntanetị na okporo ụzọ, karịsịa ma ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ ngwá ọrụ SEO.
Kpọtụrụ email gị tupu ị kpọtụrụ onyeisi nwe ụlọ. Site na azu aha, ndị mmadụ nwere ike ịhụ gị na ọdịnaya gị ozugbo. Ndị na-ede blọgụ dị iche iche nwere ike ịnweta nkọwa dị iche gbasara gị ma ọ bụ ọdịnaya gị. Nye ihe zuru oke maka ihe mere ị ga-eji dị ka onye ọbịa na post ahụ. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, gụnyere njikọ sitere na blọọgụ gị gara aga.
Mepụta ọdịnaya dị mkpa. Cheta na ọdịnaya kwesịrị ịbụ maka ndị na-ege ntị. I kwesịghị iji nke a dị ka ohere maka gị ikwu banyere onwe gị, ika, ngwaahịa ma ọ bụ mgbasa ozi..Mepụta ọdịnaya dị mkpa maka mkpa ha dịka ọ bụ banyere ihe ị na-eme na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ndị na-ege ntị na-eche naanị ihe ị na-etinye na blọọgụ gị, ọ ga-adịrị ha mkpa.
Uru ndị ọbịa na-eziga
Ịnye ndị nzipu ozi na-enye ohere ka ụlọ ọrụ na-eziga ndị ahịa nwere ike ịnweta okporo ụzọ nke ọzọ blog. Ọ na-eme ka mgbanwe nke ebe nrụọrụ weebụ dị. Ndị na-ede akwụkwọ na-aba uru na ogo weebụ na SERP algorithms. A blog na-aghọ ikikere mgbe ọ nwere ọtụtụ ndị ọzọ na ọbịa posts na-atụ aka na ya.
Ịmepụta mmekọrịta siri ike na ụdị ndị ọzọ bụ ihe dị mkpa. Nlekọta ndị ọbịa na-eme ka saịtị wee nwee mmekọrịta chiri anya na ndị ọzọ n'otu niche ahụ. Ndị isi na òtù dị iche iche na-adabere na ozi ndị ọbịa ha ka ha ruo ọtụtụ nde ndị ahịa. Site n'inwe mmekọrịta siri ike, ị ga-erite uru site na okporo ụzọ a.
Njikọ njikọ bụ akụkụ ọzọ nke ntinye nyocha. Izi ozi ndị mmadụ bụ otu n'ime ụzọ kachasị mfe iji nweta ndu. Mgbe ị na-ezipụ ndị ọbịa, ị na-azụlite ọdịnaya ndị na-ekere òkè okwu na blọọgụ gị zubere. N'ihi ya, ma blọọgụ abụọ nwere uru dị na ya na ịchọta ndị na-eleta ndị ọbịa nke blog gara aga.
Ndị ọbịa nwere ike ịme bọtịnụ oku na-eme. N'ime usoro ahia ọ bụla n'ịntanetị, ịnweta ndị na-agụ akwụkwọ dị mkpa iji pịa njikọ gị ma banye na ọdịnaya gị bụ isi ihe mgbaru ọsọ. Site na nzipu ozi ndi mmadu, mmadu nwere ike idebe bọtịnụ tinyere oku na-eme ka blog gị. Mkpọchi ndị a nwere ike ime ka okporo ụzọ gị dịkwuo ukwuu ma mechaa mee ka blog gị mara. Otú ọ dị, ọ bụ ihe gbasara iwu ka ị na-akpachara anya na ohere a. Ọtụtụ ndị na-ede blọgụ ndị nwere oghere ndị ọbịa nwere ike ọ gaghị akwado echiche a dị ka mkpa ha na-agbakarị na ọdịnaya gị.
Ịnye ndị na-ede akwụkwọ nwere ike ime ka ị nweta ọtụtụ niches ndị ọzọ. Dị ka a hụrụ n'elu, ọ na-enyere mmadụ aka ịmekọrịta mmekọrịta siri ike na ụlọ ọrụ ndị ọzọ yana ịmepụta ihe gị. Nke kachasị mkpa, akwụkwọ ozi ndị ọbịa na-enye aka na mgbalị SEO gị, ọ nwere ike ime ka ọnụego gị dị elu.